The Lightest Electric Skateboard On ụwa - Jomo Technology Co., Ltd
Anyị na-uche-banyere otu n'ime ụzọ kasị mma isi na-na ọdabara erughị ala na yinye drive. Ọ bụghị ihe niile hoverboard ma naanị ndị a Electric hoverboards nke nwere kwesịrị ekwesị certifications nọ ná nchebe iji - a na-agụnye ihe niile kasị elu 10 kacha mma hoverboards depụtara n'okpuru. Ha na-sina a na-mepụtara. Ọ bụrụ na ị na-aka banyere mma i nwere ike pedal ịnyịnya ígwè na-eji ya na ala aka mode. E nwere mini Harleys, uwe ojii ọgba tum tum, na mgbere. Anyị chere na a ghaghị a ụzọ ka mma na-eme ndị a obere njem. Mgbe e mesịrị, ma eleghị anya, ị mma na-amụta banyere ihe n'ezie mkpa. Ma ị nanị njem na seaside maka a surf ule, isi si ka anya-ụzọ unyi, ma ọ bụ nọgide na-na onerous-n'ala ike ọsọ styling gburugburu obi, e nwere ihe a Koowheel Electric Skateboard kpamkpam adịkwa ka ị, na gị style. Ọtụtụ futuristic echiche egosi kwa-agaghị eme eme iji ezi uche, ma nke a electric skateboard n'ezie na-arụ ọrụ na mesịrị bụrụ ma fun na bara uru.
Ọ na-nnọọ jụụ, n'ụzọ dị irè-wuru na-atọ ụtọ na-enweta nnọọ jụụ, n'ụzọ kwesịrị ekwesị na-wuru na fun na-enweta! I nwere ike ọ nọkwasi ya n'akụkụ gị obodo. Ị na omume nwere ike dọrọ site na nkuku na ala ad i nwere ike nanị chọrọ ịdabere na-atụ ma ọ bụ azụ nke mere na ị na-enwe ike ịga n'ihu ma ọ bụ laa azu. E nwere ọtụtụ atụmatụ dị ka bellow:
1. The zuru okè obere njem na ngwá ọrụ na-elu playability.
2. fechaa, kọmpat, obere, mfe.
3. Cheap ma inogide.
The Powerboard Self adịzi skuuta bụ maka mmadụ nile. Ọ bụ n'ezie ezi a bit kpamkpam dị iche iche ka ọkọlọtọ 'hoverboard' onwe adịzi scooters anyị na-eji na-! Ikiri professionalrider sịga n'azụ taya, ọ bụ agwụ iche na ọ bụ na a skuta.
Ọ dị mkpa na-edebe nke ya kacha ike ọsọ, ndụ batrị, na-emeso, brek, ọnụ ọgụgụ kasị elu, nchekwa dị mkpa, na warranties. Ọ dịghị mberede akwụsị na ya nwere ike ị hurtling egwu n'ihu. Mgbe ị na-atụle electric skuuta, skateboards yikarịrị bụghị ụzọ na ndekọ. Nke a bụ ihe ọzọ na abụọ wheel electric onwe ziri ezi skuuta .I pụrụ ọbụna guzo na ya na ọbụna tụgharịa 360 ogo na a ntụpọ. Ụkwụ abụọ na abụọ engines ndị bara uru n'ihi ike ọsọ ma kwụsie ike. Nke a bụ a dị oké mkpa echiche ka, bụrụ na ị bụ onye ibu ma ọ bụ obese akpan akpan onye.
Post oge: Jan-25-2018